umbuzo ILS Carriers
iinyanga 2 3 kwiiveki ezidlulileyo #1385 by lucou
Ilayishiwe kwaye ifake i-Rikoo AI abathwali kwi-P3Dv4.4
Umsebenzi ogqwesileyo kunye nemiphumo emihle kunye nemifanekiso.
Ingxaki kuphela enayo: andinakuyifaka indlela ye-ILS ngenxa yokungabikho kwesignali.
I-Aircraft yi-Aerosoft F14.
Ndisebenzisa ii-frequencies ezahlukeneyo eTacan ne-Nav1, kodwa akukho mphumo.
Iimpawu zeTacan kunye ne-ILS zisebenza ngokugqibeleleyo kumaziko eenxweme.
Mhlawumbi aba bathuthi abanalo i-ILS freq?
Ixesha ukwenza page: 0.325 imizuzwana